सर्वश्रेष्ठ सिस बो बो गाइड र रणनीति - Gambling Papa
1 सिस बो के हो?
2 सिस बो कसरी खेल्ने?
3 सिस बो रणनीति चार्टहरू के हुन्?
4 सिस بو बोई शुरुआतीहरूको लागि
5 सिस बो शर्त रणनीति
6 सिस बो मा कसरी जित्ने?
7 सिसो बो सुझाव र युक्तिहरू
यदि तपाईंले यस विशेष खेलको ’boutमा सुन्नुभएको छैन भने, त्यसो भए तपाईं ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरूसँग सामेल हुन सक्नुहुन्छ जो केवल नोटिस लिन थाल्छन्। जबसम्म तपाईंको ज्ञान घाटाको ’boutमा सचेत रहन्छ, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं सजीलै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। यस मार्गनिर्देशनको अन्त सम्ममा, तपाईंलाई यस गतिविधिको प्रकृतिको ’boutमा पूर्ण जानकारी दिइनेछ। यस तरिका, जब तपाईं यसलाई अर्को देख्नुहुन्छ, तपाईं कार्यमा भाग लिनको लागि तयार हुनुहुनेछ।
मौकाको असमान खेल:
केन्द्रिय, यो अवसरको खेल हो कि समानताको वास्ता गर्दैन। समानताहरू समान नभएकोले, तपाईंको फाइदाको लागि अस्थिरता प्रयोग गर्न सम्भव छ। त्यो कारणले गर्दा, धेरै प्लेयरहरू यो प्रस्ताव देखिन्छ संभावना देखि पेचिलो भएका छन्।
रणनीतिहरूसँग खेल्दै जुन तपाईंलाई अधिक पटक जित्न मद्दत गर्दछ:
एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रयोग गरेर, तपाईं एक लाभ संग दूर हिंड्ने सम्भावना वृद्धि हुनेछ। ठूलो र ठूलो, धेरै व्यक्ति क्यासिनोमा आउँदैनन् आफ्ना शर्टहरू गुमाउनका लागि। वास्तवमा, पहिलेको अनुभव, यस्तो देखिन्छ कि धेरै मानिसहरूले घरको साथ भुइँ बढार्छन्। केहि अवसरहरूमा यस किसिमको खेलको साथ, यो वास्तविक सम्भावना हो।
शुरूबाट, हामी सहयोग गर्न तयार छौं:
चीजहरू अनलाइन समीक्षा गर्दा, यो तपाईंको स्रोतहरू प्रमाणित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यति धेरै विरोधाभासी रिपोर्टहरु रहेकाले, तपाईको दिमागमा श doubts्का बिना नै ती पौडी खेल्न गाह्रो छ। अवश्य पनि, हामीसँगै, तपाईंले यस्तो प्रतिष्ठा पाउनुभयो जुन निर्माण गर्न हामीलाई वर्षौं लाग्यो। तसर्थ, हामी तपाईंलाई सँधै भरपर्दो जानकारी प्रदान गर्नेछौं। यस तरिकाले, तपाईले विश्वास पाउन कतै पुग्नुभयो जब तपाइँ जूवाको ’boutमा सिक्नुपर्दछ।
आज, पहिले भन्दा धेरै व्यक्तिहरू यो खेल खेलिरहेका छन्:
जहाँसम्म यस खेलको सवाल छ, यो पहिले भन्दा अहिले धेरै लोकप्रिय छ। सामान्यतया बोल्दै, सबै भन्दा बढि सहमत छन् कि यो बढि पहुँचको परिणाम हो। इन्टरनेट पहुँचको Dawning व्यापकता को लागि धन्यवाद, मानिसहरु को लागी एक नयाँ टन नयाँ तरीका छन्। रमाईलोमा सम्मिलित हुने धेरै तरिकाहरूका साथ, यो कुनै अचम्म मान्दैन किन यति धेरै संख्यामा नयाँ आगन्तुकहरूले ढोकामा बाढी ल्याइरहेका छन्।
सिस बो के हो?
यस बिन्दुमा हामीले अनुमान लगायौं कि तपाई यस खेलको ’boutमा के जान्न चाहानुहुन्छ। निस्सन्देह, यो एक कुरा हो कि यसको नामलाई पहिचान गर्नु त्यो एक रातबाट क्यासिनोमा वर्षौं अघि। जे होस्, यो खेल कसरी खेल्ने भनेर बुझ्नको लागि यो बिल्कुल भिन्न चीज हो। ’cause, एकचोटि तपाईंले यो बुझ्नुभयो भने, तपाईं टेबलमा बस्न तयार हुनुहुनेछ जतिखेर अवसर आफैं प्रस्तुत हुन्छ।
मूलतः प्राचीन चीनबाट:
यद्यपि यसको वास्तविक उत्पत्ति विवादित छन्, सहमतिले संकेत गर्दछ जस्तो देखिन्छ कि चीन त्यो स्थान थियो जहाँ यो पहिलो फेला परेको थियो। ती पुरातन मुलुकहरूमा मानिसहरूले मौकाको खेल खेल्न सुरु गरे जसमा तीन पासा थिए। समयको साथ, त्यो खेल आधुनिक संस्करणमा विकसित भयो, जुन हामी आजसम्म खेलिरहन्छौं।
तीन पासाका साथ खेलाइएको:
मैदानमा तीन पासाका साथ, त्यहाँ क्रेप्स जस्ता धेरै परिचित खेलहरूसँग भन्दा अझ बढी सम्भावनाहरू छन्। त्यो अवस्थामा, तपाईले दुईवटा पासाको नतिजामा तपाईको बाजी लगाउनु भएको छ। यस अवसरमा, तपाईं मिक्समा अर्का एक थप्नुहुनेछ। त्यसकारण, सम्भावनाहरूको संख्या द्रुत रूपमा वृद्धि हुन्छ, अप्रत्याशित थपको लागि धन्यवाद।
विश्वभर विभिन्न बिभिन्न प्रकारहरू खेले:
यद्यपि यो खेलको विभिन्न फरक भिन्नताहरू अवस्थित छ भनेर बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया बोल्दा, उही संस्करण सबै अमेरिकी क्यासिनो वा अनलाइन क्यासिनो मा प्रयोग हुन्छ। अझै, यो विदेशमा यात्रा गर्दा मान्छेहरु लाई केहि अधिक विदेशी विचरण को सामना गर्न को लागी सुन्ने छैन। यदि तपाईं आफूलाई त्यस भीडको बीचमा गणना गर्न सक्नुहुन्छ, हामी तपाईंलाई सराहना गर्न चाहन्छौं। यस प्रकारको अचम्मको खेलसँग मात्र तपाई परिचित हुनुहुन्न, तर तपाई यात्रा पनि गर्नुहुन्छ।
नामको शाब्दिक अनुवादको अर्थ “बहुमूल्य पासा” हो:
स्पष्ट रूपमा यस खेलको नाम यसको चिनियाँ नामको एlic्गलिकेसन हो। यसको मूल भाषामा, यसले बहुमूल्य पासालाई शाब्दिक अर्थमा अनुवाद गर्दछ। यो तपाईको फिटिंग नाम जस्तो देखिन्छ यदि तपाईले हामीलाई सोध्नु भएको छ भने।
सिस बो कसरी खेल्ने?
विगतमा क्यासिनोमा हुँदा के तपाईंले खेल क्रेप्स खेल्ने मौका पाउनुभयो? यदि त्यसो हो भने तपाईले यस खेललाई आश्चर्यजनक मिल्दो फेला पार्नुहुनेछ। धेरै जसो अंशमा मानिसहरू स्वादमा थोरै मसला थप्नको लागि अतिरिक्त मर्ने थप फेला पारेजस्तो देखिन्छ। धेरै जसो अवसरहरूमा, तपाइँ मर्नलाई स without्केत नगरिकन यस खेल क्रम्पबाट कति फरक छ भनेर वर्णन गर्न कडा चिन्नुहुनेछ। तल, हामी कसरी खेल खेल्दछौं सामान्य बहाव वर्णन गरेका छौं। निम्नको साथ आफूलाई परिचित गरेर, तपाईं आफूलाई अनौंठो पानीमा फेला पार्न सक्नुहुन्न। एकचोटि तपाईं शर्त बनाउन तयार हुनुहुन्छ, तपाईं कुनै पनि चिन्ता बिना नै माथि हाम फाल्न सक्नुहुन्छ।
एउटा शर्त राख्न, तपाईंले आफ्नो चिपहरू टेबलको अनुरूप खण्डमा राख्नुहुनेछ:
खेल क्रेप्सको समान, जब तपाइँ तपाइँको शर्त राख्नुहुन्छ, तपाइँ टेबुलको एक विशेष भागमा राखेर तपाइँले कसलाई बेकामको बनाउनु हुन्छ भनेर डिजाईन गर्नुहुन्छ। चिप्स बसिरहेको ठाउँमा निर्भर गर्दै, तपाईं मरणबाट निश्चित परिणाममा बाजी दिनुहुनेछ। डिलरले उनीहरूलाई जान दिए पछि तपाईले पुरस्कृत हुनुहुनेछ यदि तपाईंले कल सही तरिकाले गर्नुभयो भने।
पछि, तपाई डिलरले एउटा सानो छाती लिनुहुनेछ जुन मर्छ।
मानौं तपाईं आफ्नो शर्त समयमै बनाउनुहुन्छ, तपाईं रोलर कोस्टरमा हुनुहुनेछ एक पटक तपाईंले डिलरलाई पासा टाढा देख्नुभयो। त्यस बिन्दुमा, यो कार्य सुरु हुने समय हो।
त्यसोभए, तिनीहरूले यो सताउँदा छाती बन्द गर्नेछन्
पासा समावेश गरेपछि, डिलरले कन्टेनरलाई हिंस्रक हल्लाउन सुरु गर्दछ। पर्याप्त समय बितिसके सम्म यो प्रक्रिया केही क्षणहरूको लागि जारी रहन्छ। त्यस बिन्दुमा, उसले टेबुलमा यसका सामग्रीहरू प्रकट गर्दछ।
एक पटक पर्याप्त समय बितिसकेपछि, डिलरले बक्स खोल्यो मरण प्रकट गर्न:
लामो समयको लागि पासा हल्लाए पछि, टेबलमा सबैजनाले तिनीहरूलाई हेर्ने मौका पाउनेछन्। याद गर्नुहोस्, डिलरलाई हतार नगर्नु महत्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, तिनीहरू त्यस्ता व्यवहारलाई अपमान गर्दछन्। जहाँसम्म, हाम्रो धेरै जसो अनुभवहरूमा डीलरहरू उनीहरूको कामको सट्टामा चाँडो हुन्छन्।
उपयुक्त समयमा तपाईंको शर्त राख्न नबिर्सनुहोस्:
पक्कै पनि, यदि तपाईं एक बिस्तार बिस्तार बिस्तारै भयो भने तिनीहरूको द्रुतता पनि तपाईंको विरुद्धमा काम गर्न सक्दछ। त्यो अवस्थामा, तपाईं चिपहरू टेबलमा छिटो राख्न सक्नुहुन्न, तिनीहरूलाई गोल गर्नको लागि योग्य बनाउनको लागि। दुर्भाग्यवस, यदि यो तपाइँलाई भयो भने, त्यसो भए तपाईले प्रतिक्षा बाहेक अरू धेरै गर्न सक्नुहुन्न। यस बाहेक, यस भन्दा बढि समय तपाईको बाट राख्नुको महत्वका ’bout जान्नु भन्दा राम्रो उपाय के हुन सक्छ?
साथै, सुनिश्चित गरिएका कुनै पनि दांव तालिका सीमाको न्यूनतम र अधिकतम भित्र छन्:
फेरि, हामी जोड दिन चाहन्छौं कि यो तपाईंको बेट्सलाई समयमा राख्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ। केहि क्षेत्रहरु मा, डीलर असामयिक दांव मा दयालु ले छैन। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई समय सीमा पछि टेबलमा राख्नुहुन्छ भने, उनीहरूले टेबुल खाली गर्न सोध्नु यो बेवास्ता गरिएको छैन।
सिस बो रणनीति चार्टहरू के हुन्?
धेरै जसो समय, शुरुवातकर्ताहरूले कुनै संकेत बिना नै हिंड्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, मान्नुहोस् कि तपाईले यस खेलको दौर कहिल्यै खेल्नु भएको छैन। तपाईले कसरी थाहा पाउनुहुनेछ प्रत्येक शर्तको नहुनु के हुन्छ यदि त्यो भएमा? हाम्रोलागि, यो स्पष्ट देखिन्छ कि यो एक असक्षम स्थिति हो। त्यस कारणका लागि, हामी सँधै सिफारिस गर्दछौं कि शिशुहरू क्यासिनोमा जाँदा उनीहरूसँगै राख्नको लागि केहि रणनीति चार्टहरू प्रिन्ट गर्नुहोस्।
बिभिन्न शर्तहरूका भिन्न भिन्नताहरू छन्:
सबै भन्दा माथि, प्रत्येक परिणामको असफलता तपाईं कण्ठ गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधारणाहरु को हो। किनकि यसले प्रत्येक भुक्तानीको आकार निर्धारण गर्दछ, तपाईं त्यो जानकारी प्रत्येक राउन्ड अघि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। अन्यथा, तपाईले कत्ति अपेक्षा गर्ने हो थाहा छ यदि तपाईले राम्रो कल गर्नु भयो भने।
तपाईंको भुक्तान सम्भावनाहरू प्रश्नमा शर्तको अवधारणामा फरक पर्दछ:
प्रत्येक खेलको लागि सम्भावनाहरूको ’boutमा सिकेर, तपाईं महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथ सुसज्जित हुनुहुनेछ जब तपाईं खेलको भविष्यका ’bout सोच्नुहुन्छ। अन्य खेलहरूको तुलनामा, तपाईंसँग प्रत्येक राउन्ड सुरु हुनु अघि विश्लेषण गर्न अझ बढी हुनेछ। त्यहाँ तीन पासा छन्, यस्तो देखिन्छ कि यो क्यासिनो मा अन्य खेलहरु भन्दा धेरै जटिल थियो। जे होस्, तपाईले आफ्नो विशेषज्ञताको विकासको रूपमा तपाईले थपिएको जटिलताको सराहना गर्नु हुन्छ।
ग्रान्टर इनामहरूको लागि तपाइँको जीतलाई पार्ल्याउनुहोस्:
मानौं खेल को पहिलो केहि खेलहरु तपाइँको पक्ष मा जाने। पछि, तपाईंले सिक्काको सानो स्ट्याक संग्रह गर्नुपर्नेछ। यीसँग, तपाईले उनीहरूको मान उठाउनु पर्दछ कि तपाईलाई बाँकी भीडको माथि चलाउन। तपाईंको पहिलेको जीतलाई प्रयोग गरेर, तपाईंको बाजीको आकार बढ्न जारी रहन सक्छ खेल प्रगति गर्न। अन्तत :, प्रत्येक खेलको प्रभावी ढंगले प्रबन्ध गरेर, तपाईको stash को आकार द्रुत रूपमा बढ्न थाल्छ।
रणनीतिक हेजको प्रयोग लागू गरेर अशान्ति रोक्नुहोस्:
केहि बिन्दुमा तपाईले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ कि तपाईले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ तपाईले जब तपाईको बिरूद्ध कुरा गर्न थाल्छ। जब यो क्यासिनोको कुरा आउँछ, सबैजनाको दिन प्रकाशमा हुन्छ। जेसुकै भए पनि, त्यस्तै विपरित अनुभवको ’boutमा पनि भन्न सकिन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको जीतलाई सुरक्षित राख्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले कसरी सामरिक बेट्सलाई घाटा बिरूद्धको हेजको रूपमा राख्ने भनेर सिक्नुपर्नेछ।
सिस بو बोई शुरुआतीहरूको लागि
सबै भन्दा अन्य खेलहरू जस्तै, तपाईं पहिलो यो खेल्न शुरू गर्दा, सिक्नुपर्ने धेरै त्यहाँ महसुस गर्नुहुनेछ। अवश्य पनि, यससँग मौकाको अन्य खेलहरूको तुलनामा जटिलताको केही थप तहहरू छन्। अझै, एक सानो समय लगानीको साथ, तपाईं अवधारणाहरूको सम्पूर्ण क्याटलग मास्टर गर्नुहुनेछ। त्यस प्रक्रियाको अन्त सम्म, तपाईं टेबलमा तल फ्याँक्न सजिलो हुनेछ।
यदि तपाइँ जित्नेमा सबैभन्दा ठूलो अनौंठो चाहानुहुन्छ, तपाईले एउटा धेरै जसो बाजी लिन चाहानुहुन्छ:
याद गर्नुहोस्, तपाईंले बनाउनुहुने प्रत्येक शर्तको लागि, त्यो खेलमा पासा अवतरणको अनौठो विवरणहरूमा निर्भर गर्दछ। अधिकांश भागको लागि, ठूलो भुक्तानी एक विशेष शर्तको लागि हो, पासालाई ती अनुहारहरू देखाउन कम सम्भावना हुन्छ। तसर्थ, यदि तपाईं एक सफल शर्त राख्नको आफ्नो बाधा अधिकतम गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले साना पेआउट्सको साथ बेट्स छनौट गर्नुपर्नेछ।
सामान्यतया, खेलाडीहरूले ठूलो स्थानमा शर्त लगाउँदछन् यदि उनीहरूलाई विशेष भाग्यशाली महसुस हुँदैन भने
सबै भन्दा माथि, त्यहाँ टेबलमा ठूलो ठाउँको रूपमा देखा छ। यस स्थानमा, तपाईं आफ्ना चिप्स राख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाको एक निश्चित स्तर प्रदान गर्न। धेरै अवसरहरूमा, तपाईंसँग त्यहाँ चिप्स राखेर सहि कल गर्न लगभग %०% शट हुन्छ। जहाँसम्म, त्यहाँ सफलता को यति उच्च संभावना छ, भुक्तानी यति उच्च छैन कि यो भएको थियो उनले सफलतापूर्वक अर्को कल गरे।
अर्को विकल्प भनेको तपाईंको चिप्स सानो स्थानमा राख्नु हो
अर्कोतर्फ, केहि खेलाडीहरू आफ्नो दाँजी सानो स्थानमा राख्न रुचाउँछन्। ठुलो ठाउँसँग मिल्दो, सानो ठाउँसँग तपाईंले राख्न सक्ने प्रायः अन्य कलहरू भन्दा उच्च भिन्नताहरू हुन्छन्। यी दुई बीच अर्को समानता तिनीहरूको भुक्तानीको आकार हुनेछ। ती दुबै साथ, तपाईं सफलता को एक अपेक्षाकृत उच्च संभावना आशा गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, ती दुबै हुन् सबैभन्दा कम-भुक्तान शर्त जुन तपाईं यस खेलमा बनाउन सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक अन्य स्थानमा हुने घट्ने क्रमश: कम समस्याहरू छन्
अब, यदि तपाई ठूलो बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले तपाईको बेट्स अर्को ठाँउमा राख्नु पर्छ। टेबलमा अन्य स्पटहरूमा, तपाईंले बेटहरू पाउनुहुनेछ जुन मृत्युको विशिष्ट परिणामहरू दांउछ। सामान्यतया, यी सबै स्पटहरू हुने सम्भावना कम हुन्छ। अझै पनि, ती यति विरलै देखिने भएकोले, यदि तपाईं तिनीहरूमा सफलतापूर्वक एक शर्त लगाउनु भयो भने, भुक्तानी एकदम ठूलो हुन सक्छ।
सिस बो शर्त रणनीति
अन्तमा, जब यो जुवा खेल्ने कुरामा आउँछ, यो एक बरु व्यक्तिगत अनुभव हुन जान्छ। जब जहिले पनि यस्ता चीजहरू आउँदछन्, हामीले जहिले पनि व्यापक रूपमा लागू हुने सल्लाह दिनको लागि सक्दो गर्नुपर्दछ। अन्यथा, हामी हाम्रो श्रोताको केही अंश जोखिममा लिनेछौं। हामीसँग तपाईले त्यस्तो विभाजनकारी सामग्रीको ’boutमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यसको सट्टामा हामीले सामानहरू सबै ड्रामा बिना नै पाएका छौं।
के तपाई महत्वाकांक्षी वा सतर्क हुन चाहानुहुन्छ ?:
जुन जूवा व्यक्तिगत हो, तपाईं आफ्नो ’boutमा प्रश्नहरूको उत्तर सजीलो पाउनु पर्छ। भित्री हेराईबाट सिक्न, तपाईं टेबुलमा बसिरहेको बेला तपाईंलाई रोजगार लिनको लागि सबैभन्दा उचित विधि फेला पार्नुहुनेछ। त्यस रात, रातको अन्त सम्ममा, तपाई आफु आउनु भन्दा अझ राम्रो महसुस गर्नुहुन्छ।
तपाईं कत्तिको जोखिम सहन सक्नुहुन्छ ?:
जहाँसम्म मौकाको खेलहरूको सवाल हो, जोखिम सहिष्णुता भनेको पेशेवर जुवा खेल्नेहरूको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो। जोखिम सहन गर्न, यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईं क्यासिनो बाहिर आर्थिक रूपमा सहज महसुस गर्नुहुन्छ। एक पटक तपाईले वित्तीय सुरक्षाको एक निश्चित भावना विकास गर्नुभयो, यो तपाईंको सम्पत्तीको सानो अंशसँग खेल्न दुख्दैन। अझै, यसले मद्दत गर्दछ यदि तपाईंले कति पैसा क्यासिनोमा प्रवेश गर्नका लागि सीमित गर्नुभयो भने। बाँकी यसलाई घरमै छोड्दै, तपाईं कहिल्यै नघल्ने खराब परिणामहरू रोक्नुहुनेछ। समय बित्दै जाँदा, तपाइँ जूवाको कला मास्टर गर्न जारी राख्नु भएपछि, तपाइँले सहन सक्नुहुने जोखिमको स्तर समान रूपमा समायोजित हुनेछ।
सामान्यमा तपाई कुन प्रकारका रणनीतिहरू मन पराउनुहुन्छ ?:
यसका साथै, यति धेरै रणनीतिहरू उपलब्ध छन्, त्यहाँ सबैका लागि छनौट गर्न पर्याप्तहरू छन्। मानौं तपाईं आफैंलाई एक आक्रामक जुवाडेको मान्नुहुन्छ। यदि त्यसो भएमा, त्यसो भए तपाईले व्यक्तित्व प्रकारको लागि उपयुक्त रणनीति खोज्नु भयो भने उत्तम हुन्छ। अर्कोतर्फ, यदि तपाईं अधिक सतर्क जुवा खेलाडी बन्नुभयो भने, त्यसो गर्नु राम्रो हुन्छ यदि तपाईं अधिक मापन गरिएको तरिका पत्ता लगाउनुहुन्छ। तसर्थ, उपयुक्त रणनीति पत्ता लगाउनु जुवा खेल्ने व्यक्तिको व्यक्तित्वमा निर्भर गर्दछ जुन हामी मध्ये धेरै स्वीकार्न इच्छुक छौं।
सिस बो मा कसरी जित्ने?
सबै प्रतिस्पर्धाहरुमा एक विजेता हुनै पर्छ जब यो रेखाको अन्तमा आउँछ। जबसम्म तपाईं प्रतिस्पर्धाको लागि स्वीकार गर्न इच्छुक हुनुहुन्न, यो सधैं महत्त्वपूर्ण छ कि यो एक व्यक्ति को लागि जीत लिन के ले लाग्छ के मात्र विचार गर्न। त्यस तरीकाले, जब तपाईं आफैंलाई कार्यको बीचमा फेला पार्नुहुन्छ, तपाईं जन्मजात ज्ञानमा भर पर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंले जीवनभर प्राप्त गर्नुभयो।
अनुभवले अधिक मान्यता दिईन्छ:
सबैभन्दा माथि, यस्तो देखिन्छ कि यदि सफलताको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक जुन जुवाको कुरा आउँछ जुन जुवारीले अनुभव गरेको स्तर हो। तिनीहरूको अनुभवको स्तर बढ्दै जाँदा, उनीहरूले बनाउने बेट्सको गुणवत्ता पत्राचारमा वृद्धि हुन्छ। यसैले, तपाईको आफ्नै विशेषज्ञतालाई विकसित गरेर, तपाईले महसुस गर्नुहुनेछ जस्तो कि सही निर्णयहरू गर्न सजिलो थियो।
खेलमा सुधार गर्न हामी सल्लाहको साथ अभ्यास गर्न सिफारिस गर्दछौं:
यसको शीर्षमा, तपाईंको अभ्यास समय अधिकतम गर्न, इरादाको साथ अभ्यास आवश्यक छ। तपाईंको ध्यान केन्द्रित नगरीकन जहाँ यो सम्बन्धित छ, तपाईं केवल समय पार गर्दै हुनुहुन्छ जबकि न्यूनतम परिश्रम गर्दै। जब तपाईं अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको नतिजाहरू अझ राम्रा हुनेछन् जति बढी इच्छाशक्ति लगानी गरिन्छ।
अवश्य पनि, किनकि यसले ठूलो भागमा अवसरमा निर्भर गर्दछ, तपाईं केवल कहिले सम्म त्यस्तो डिग्रीमा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ:
सरलताका साथ भनिएको छ, एक पटक टेबुलमा पासा जग्गा पाउने सम्भावना अन्तिम मध्यस्थता हुन्छ। खेल भाग्यमा निर्भर गर्दछ, त्यहाँ तपाईले ठूलो हिड्न क्यासिनो ज्याकपॉट को साथ टाढा हिड्नको अनौठो अधिकतम गर्न मात्र धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ, यसले अनावश्यक रूपमा हार स्वीकार्नु राम्रो गर्दैन। जबसम्म तपाईं यसको सीमितताहरू बुझ्नुहुन्छ, तब त्यस्तो प्रयासको विकासमा तपाईंको प्रयासहरू खसाल्नु व्यर्थको हुँदैन।
सिसो बो सुझाव र युक्तिहरू
अन्तमा, हामी प्रस्थान अघि, हामीले केहि ट्रिकहरू पायौं जुन तपाईंलाई मनपर्न सक्छ। तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकेर, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो आस्तीनबाट बाहिर तान्न सक्नुहुन्छ एक पटक सही पल्ट आयो। त्यस बिन्दुमा, यो तपाईंको पेटको निर्णय मार्गदर्शन गर्ने अन्तर्ज्ञान बाहेक अरू केहि पनि हुँदैन। यद्यपि घरको परिप्रेक्ष्यमा तपाई टेबुल अरू भन्दा बढि जस्तो गरी हुनुहुनेछ। यदि त्यो आकर्षक लाग्दछ भने, तब हामी विश्वास गर्दछौं कि निम्न जानकारी बिल्कुल रमाईलो हुनेछ। जबसम्म तपाईं नयाँ क्षितिजहरू अनुभव गर्न तयार हुनुहुन्छ, तब यस खेलले तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न केही भयो जुन कसैले पनि अहिलेसम्म मिरर गरेको छैन।
याद गर्नुहोस्, तपाईंको शर्त समयावधि सकिनु अघि राख्नु महत्त्वपूर्ण छ:
शुरुवातकर्ताहरू द्वारा गरिएको सबैभन्दा धेरै गल्तीहरू यस खेलको ’boutमा के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ? हाम्रो दृष्टिकोणबाट, उत्तर स्पष्ट देखिन्छ। सामान्यतया बोल्दा, खेलाडीहरूले समयसीमामा गल्ती गर्छन् जब उनीहरूलाई बेट दिने अनुमति दिईन्छ। उनीहरूको पाल्तु पशु राखे सम्म धेरै लामो पर्खाइ गरेर, जब उनीहरूले अन्तमा उनीहरूलाई राख्ने निर्णय गर्छन्, तिनीहरूले नियम र वास्तविकता तोड्दैछन्। जबसम्म डिलरले खास मित्रवत महसुस नगरेसम्म, खेलाडीहरूलाई त्यस बिन्दुबाट टेबलबाट बाहिर निकाल्नु उनीहरूको अधिकार भित्र हुन्छ। अझै, तिनीहरूलाई कहिले राख्ने भनेर सिक्न धेरै समय लाग्दैन। घरपालुवा जनावर नियोजनको नियम बुझेर तपाई यस्तो गल्ती गर्नुहोला कि भनेर लाजमा पर्नुहुनेछ।
सबै बेट्सको जितको समान समानताहरू हुँदैन:
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, जब तपाईं आफ्नो बाजी लगाउनु हुन्छ, तपाईंले त्यो शर्त जितेको अवधारणा थाहा पाउनुपर्नेछ। अन्यथा, तपाइँ यो कसरी प्रदर्शन गर्दछ कुनै ज्ञान बिना तपाइँ तपाइँको पैसा राख्नुहुनेछ। यदि हामी ती जुत्ताहरूमा हुने गर्छौं भने हामी परिणामलाई पूर्ण रूपमा सचेत नभई त्यस समय खर्च गर्ने छैनौं। अर्को शब्दहरुमा, यो राम्रो हुन्छ यदि तपाइँ खेल को नियम मा अध्ययन गर्न केहि समय खर्च गरेको थियो।
जित्ने अनमोलता को रूपमा, भुक्तानी को आकार पत्राचार कम हुन्छ:
तपाईंको आय अधिकतम बनाउन, तपाईं स्पटमा तपाईंको बाजी राख्न चाहानुहुन्छ उच्चतम भुक्तानको साथ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईले अधिक जोखिम मान्नुपर्दछ अन्यथा आवश्यक पर्ने भन्दा।